ISITHOMBE: lethiwe makhanyaEnye yezindlu ekhahlanyezwe imvula.
Uthe lo mgodi wambiwa ngenyanga kaNhlaba (May) kuze kube imanje ubungenziwa lutho washiywa uvulekile kanjalo.
“Kumosheke yonke impahla esendlini ngisho izincwadi zezingane zesikole nazo zimanzi azikwazanga ngisho ukuya esikoleni. Ezinye izimpahla ebezikhona endlini okubalwa khona izimpahla zokugqoka zona zivele zaphuma zamuka namanzi ngendlela ebekukubi ngayo amanzi engena ngisho nangamawindi.
“Asazi ukuthi kumele size senzenjani ukuze umasipala wethu uzosukuma usisize. Isigcino sizowelwa izindlu siphakathi ngenxa yalamanzi ahleli engena phakathi. Sesaze sabhoboza ngisho imbobo kwamanye amagumbi endlini senzela ukuthi uma ngabe sekungene amanzi akwazi ukuphuma ngembobo ukunciphisa umsebenzi wokuloku siwakhipha,” kubeka yena.
Ngesikhathi i-Echo ifika kulendawo umgwaqo ubuvalwe inhlabathi kanye namanzi okuthiwa asuka emgodini phezulu, kanti emzini wakaNgcobo khona amalunga omndnei abesamatasa esazama ukukhipha amanzi kanye nenhlabathi endlini.
“Ukube bazilungisa lezi zitamukoko kusanesikhathi angabe asibhekene nalenkinga esibhekene nayo njengamanje. Uma ngabe kungukuthi kuyabahlula ukulungisa zona kumele bafake udonga oluzovimba amanzi-ke ukuthi angagelezi ahambe ayongena emzini yabantu. Sesikhathela manje ukuphila kanje asazi ukuthi kanti sekumele senze njani ukuze silalelwe nathi,” kubeka yena. Wonke amanzi asuka phezulu emgwaqeni uDabulamanzi aqala ezindlini ezikulowomgwaqo bese adlulele kwezingemuva emgwaqeni u-ZJ Chonco.
Ikhansela lakulendawo uMnu Dumisani Phungula uvumile ukuthi kukhona inkinga ngezitamukoko kule ndawo kodwa wathi akuyona inkinga yomgwaqo owodwa kodwa inkina yendawo yonke yase-Ashdown.
Uvumile futhi ukuthi emgwaqeni uDabulamanzi kunenkinga yesitamukoko esivalakile esingasebenzi.
“Sengilubikile udaba emnyangweni ofanele kamasipala ukuze bezokwazi ukuthi balungise lapho kuvalekele khona.
“Kodwa inkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi izitamukoko esinazo vele endaweni yethu azinawo amandla afanele ukuthi zingamelana nezikhukhukhula nokube sekuholela ekutheni amanzi ahambe ayongena emzini yabantu. Lena inkinga ebhekene nendawo yonke,” kubeka yena. Uthe loku kwavezwa ucwaningo olwenziwa eminyakeni emihlanu eyedlule. Uthe kudingeka ukuba kukhushulwe izinga lezitamukoko kule ndawo.
Ephawula ngodaba lomgodi, uthe naye akahambisani nokuthi kushiywe umgodi ombiwe isikhathi eside kangaka kungenziwa lutho kodwa wathi uselubikile udaba kamasipala.
“Siyanxusa nomphakathi ukuthi izinkinga ezifana nokuvaleka kwezitamukoko uzibike kusanesikhathi kungaze kwenzeke umonakalo.”